Dowladda KMG ee Soomaaliya oo mar kale ku celisay in ay sanadkaan cusub gacanta ku dhigayso guud ahaan wadanka Soomaaliya. - khaliilberberawi's blog
Dowladda KMG ee Soomaaliya oo mar kale ku celisay in ay sanadkaan cusub gacanta ku dhigayso guud ahaan wadanka Soomaaliya.
Dowladda KMG ee Soomaaliya ayaa mar kale waxaa ay ku celisay in ay sanadkaan cusub gacanta ku dhigayso guud ahaan wadanka Soomaaliya.
Wasiiro dowladaha Wasaaradda arimaha gudaha dowladda KMG C/rashiid Max'ed Xidig oo ka qeyb galay kulan ay mudanayaal ka tirsan Barlamanka KMG ku yeesheen Magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya ayaa waxaa uu mudanayaashaasi hortooda uga faalooday qorsha dowladda KMG ee ku aadan dalka Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay xidig in dowladda KMG ay ka go'antahay in sanadkaan 2010-ka nidaamkeedu uu gaaro guud ahaan dalka Soomaaliya xili inta badan koofurta dalka Soomaaliya ay gacanta ku hayaan dhinacyada ka soo horjeeda dowladda KMG.
“Sanadka 2010-ka hal ku dhiga Xukuumadda waxaa weeye dalka Soomaaliya in uu dhamaan Maamulka dowladda Federaalka ka hirgalo taasna waxaa ku gaari karnaa wadajir inagoo gacmaha is wadaheysana”ayuu yiri C/Rashiid Xidig.
Horay ayaa Ra'iisul wasaaraha dowladda KMG ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharma'arke waxaa uu u sheegay in dhamaadka bishaan Janaayo ay qorsheynayso dowladda KMG ee Soomaaliya in ay la wareegto qeybaha xoogaga hubaysan ay Muqdisho ka maamulaan.
Dhankooda dhinacyada ka soo horjeeda dowladda KMG ayaa sheegay in ay ka warhayaan dhaq dhaqaaqa ay wado dowladda KMG ee Soomaaliya iyagoo sheegay in iyana ay u diyaar garoobayaan sidii ay isaga caabin lahaayeen.
# Posted on Thursday, 14 January 2010 at 12:18 PM